मस्यौदामा परिमार्जन गर्नैपर्ने बुँदाहरू – Kantipur Hotline
लामो प्रतीक्षापछि सहमतिको दस्ताबेजका रुपमा नयाँ संविधानको विधेयक संविधानसभामा प्रवेश गरिसकेको छ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि, विभिन्न मान्यता वा दृष्टिकोण र विपरीत राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरूबीच जेजति सम्भव भयो, त्यति नै सहमतिसाथ परिमार्जित विधेयक आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदा संशोधन र परिमार्जनको अवसर यसले पाउनसक्छ, जसबाट आज विरोधमा सुनिएका स्वरहरू संविधानमा क्रमशः अटाउँदै जान सक्छन् । तर यसको भविष्यलाई पहिले नै निर्धारण गरेर विरोधका लागि विरोध गर्ने वा खल्तीमा समाधान नभएको ‘आन्दोलन’ चलाइरहने हो भने हामी सबैलाई संविधानबिहिन, उपायहिन र कमजोर बनाउँछ । संविधान बन्दैमा त्यसले जादूगरी झैँ पूर्णसहमति दुनियामा कहीँ कतै पनि पाएको देखिन्न । संविधानका अक्षर र भावनाले राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई कतिसम्म प्राथमिकता र महत्व दिएका छन्, त्यसैमा यसको चीरस्थायित्व रहन्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा नयाँ संविधानको विधेयक उदार र लचिलो नै छ, कठोर छैन । तर राष्ट्रका समस्याहरूलाई पन्छाएर वा त्यसलाई एकातिर छोपछाप गरेर समाधान खोज्ने गल्ती गरियो भने त्यसैले झन समस्या थप्ने निश्चित छ ।
कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको, योगदान र पौरखको धरातल मानिने मधेसलाई उपेक्षा गरेर समाधान खोज्न सम्भव छैन । मधेस समस्याको चुरो के हो, त्यसबारे दुवै पक्षबीचको श्रृङ्खलाबद्ध संवाद र नेतृत्व–कुशलताद्वारा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सीमांकनको सवालमा विज्ञहरूको समेत सहभागितामा अझै गम्भीरतापूर्वक वस्तुपरक ढङ्गले छलफल गरी उपयुक्त समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर कुनै पक्षले पनि आफ्नै पूर्वाग्रहको कसीमा अर्को पक्षको पहल र प्रयासको आँकलन गर्ने हो भने समाधानमा कहिल्यै पुग्न सकिन्न ।
त्यसैले दुवै पक्षबाट पूर्वसर्त अघि सारेर हलो अड्काउने गल्ती गर्नु हुँदैन । देशले संविधानको नाममा झण्डै एकदशक लामो राजनीतिक संक्रमण झेलिसकेको छ । त्यसभन्दा अघिको १ दशक अवधि हिंसात्मक द्वन्द्वमा अल्मलियो । भूकम्पले ल्याएको पुनर्निर्माणले अरू १ दशक समय लेला । जनता अनेक कष्ट झेलेर पटकपटक संघर्षमा होमिएका कारण जनताको बलिदानबाट परिवर्तन प्राप्त भएको हो । त्यसैले यसलाई गुम्न नदिनु नै राज्य र आन्दोलनकारी दुवैको दायित्व हो । नयाँ संविधानको विधेयकको धारा २८९ मा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रबारे उल्लेख छ । त्यसलाई परिभाषित गरेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिकका अतिरिक्त आवश्यकता भए शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर समूहहरुको सामाजिक विकासका लागि छुट्टै प्रबन्धका साथ केन्द्र वा प्रदेशअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेर त्यस्ता समूहहरुलाई स्वायत्तता दिई विद्यमान समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ । राज्यको संख्या बढाएर मात्र अपेक्षित समाधान पाउन सकिन्न । मधेस लोकतन्त्रका लागि उर्वर भूमि हो । अझ कांग्रेसका लागि त २००३ सालदेखि नै निकै ठूलो शक्तिको स्रोत पनि हो मधेस । २००३ सालको विराटनगर मजदूर आन्दोलन, २००७ सालको जनक्रान्ति वीरगन्जबाट सुरु भएर नेपालगन्जमा पुगेर टुंगिएको थियो । निरंकुशताविरुद्ध भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा पनि मधेसको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ । त्यसैले पनि मधेसलाई ‘बाइपास’ गरेर होइन विश्वासमा लिएर समाधान खोजिनु पर्छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू लगायत सबैले संविधानसभाबाहिर सडकमा ओर्लेर होइन, संविधानसभाभित्रै वार्ता र सहमतिबाट साझा समाधान खोज्नुपर्छ ।
परिमार्जन गर्नुपर्ने धारा
यतिखेर देशका धेरै स्थानमा फैलेको विरोधलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ भने अर्कातिर संविधानसभामा पुगिसकेको संविधानको विधेयकका पनि कतिपय धारा, उपधारा र बुँदाहरुमा संशोधन जरुरी छ । प्रस्तावनादेखि नै अनेकौँ धारामा प्राविधिक, भाषागत र विषयगतरुपमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीपूर्ण ब्यहोरा नहटाई संविधान जारी गरियो भने त्यसले थप जटिलता ल्याउने निश्चित छ ।
संविधानको विधेयकको धारा २८७ मा उल्लेखित संवैधानिक निकायहरुलाई निर्वाध रुपले जिम्मेवारीको कार्यसम्पादनमा नियन्त्रण गर्न र निर्देशन र नियन्त्रण गर्न संसदीय समिति रहने व्यवस्थाले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई नै कुठाराघात गर्दछ । यसबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू पंगु हुनपुग्छन् । लोकतन्त्रमा संस्थाहरुले निर्बाध रुपले काम गर्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्र जहिले र जहाँ पनि पद्धति, प्रक्रिया र संस्थाहरुबाटै हुर्किने, बढ्ने र सशक्त हुने हो । तर, त्यस्तो पद्धतिलाई नै विनाश गरेर संवैधानिक संस्थाहरुले नै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाउने स्थितिमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको लक्ष्य कसरी कायम हुन सक्छ ? धारा २९२ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ७ दिनभित्र, सभामुख/उपसभामुख २० दिनभित्र र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हास्यास्पद म्याद किन ? यी सबैलाई १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रावधान राख्दा के फरक पर्छ ?